BB iyo RSI. Tilmaamayaasha fudud ee faa&#39;iidooyinka degdegga ah | vfxAlert official blog
Bollinger Bands iyo RSI
Waxaa qoray bynaryost at Nov 4, 2017
Tilmaamayaasha iyo calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa caan ku ah ganacsatada bilowga ah ee fudeydkooda khiyaanada leh: Ganacsatadu waxay u maleynayaan inaysan u baahnayn inay bartaan suuqa iyo aragtida. Kaliya waxay furaan booska markay arkaan falaar kor ama hoos una malaynaysa inay taasi tahay waxa kaliya ee ay u baahan yihiin. Xaaladaha badankood, tani waxay kaliya u horseedaa luminta deg-degga ah ee dhammaan dadka bilowga ah waa inay fahmaan inaysan ku ganacsan karin feker la'aan, falanqaynta suuqa iyo fahamka waxa suuqa Forex yahay. Kaliya ganacsiyadaas kuwaas oo leh istiraatiijiyad ganacsi ayaa ku guuleysan kara suuqa ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah.
Muddo = 40
Tusmada Awoodda Qaraabada (RSI)
Muddo = 6
WAC - markaad aragto qiimaha wuxuu ka kacayaa khadka hoose ee BB iyo RSI sidoo kale waxay ka kaceysaa heerka 20
PUT - markaad aragto qiimuhu wuxuu hoos uga sii dhacayaa khadka sare ee BB iyo RSI sidoo kale waxay hoos uga dhaceysaa heerka 80
Calaamadda vfxalert ee algorithm ee Adaptive (M1 ama M5) waa inay ahaataa mid la mid ah tilmaanta istiraatiijiyadda hadda jirta.
Aan ka yarayn 3-5 shumacyo muddada shaxda shaqada. Haddii muddada shaxdaada ay tahay 30 ilbiriqsi taasi micnaheedu yahay waqtiga dhicitaanku waa inuu noqdaa 90-150 ilbiriqsi.
Waa inaad furtaa booska marka shuruudaha oo dhan la buuxiyo shumaca ugu horreeya ee cusub ee furmaya! Haddii aad seegto daqiiqadda shumaca koowaad furitaanka calaamadaha xiga.
Istaraatiijiyaddu waxay u shaqeysaa si aad u wanaagsan marka isbeddelka M15 ama M30 uu yahay Flat.
Wixii xulashooyinka turbo-ikhtiyaariga ah, laguma talinayo in la isticmaalo Martingale ama labanlaabo macaamilka xiga si loo magdhabo khasaarihii kii hore. Waqtiyada yar, inta badan "buuqa suuqa" waa la kala iibsanayaa, isbeddellada ayaa socon doona wax aan ka badnayn 3-5 shumacyo waana fiican tahay in la sugo calaamado adag oo ku saabsan istiraatiijiyadda. Waad kala duwanaan kartaa qadarka ikhtiyaarka iyadoo kuxiran xoogga calaamadaha vfxAlert, sida ku cad fiidiyaha;
Saamaynta suuqa ee wararka aasaasiga ah ee muhiimka ah iyo tirakoobka lagama saadaalin karo istiraatiijiyado farsamo waxaana wanaagsan in laga waantoobo ganacsiga xilliyadaan, gaar ahaan kuwa bilowga ah. Ganacsatada khibradda leh waxay u adeegsan karaan calaamado adag tilmaamayaasha iyo vfxAlert kahor intaan la sii deyn warka oo horseed u ah, laakiin kuma tiirsanaan kartid gebi ahaanba iyaga.
Tusmada Awoodda Qaraabada
Tilmaamaha RSI waa oscillator, sidaas darteedna wuxuu ku oscillates aag gaar ah, oo ku xaddidan qiimaha ugu sarreeya iyo kan ugu yar. Tusmada Awoodda Qaraabada waxaa lagu dejiyaa miisaan laga bilaabo 0 illaa 100. Waxay u shaqeysaa sida ugu wanaagsan, iyadoo la gaarsiinayo meelaha ugu daran. Qiyaasta qiimeynta waa labo xariiq oo lagu sawiray heerka 30 iyo 70. Waxaa la rumeysan yahay in aagga xad dhaafka ah ee la soo iibsaday uu ka sarreeyo 70, 30 ka hooseyna la iibinayo. Sidaa darteed, marka qiimaha Tilmaanta Xoog ee Qaraabadu ay gaadho oo ay kor uga sii kacdo 70, waxaa jira khatar ah hoos u dhac ku yimaada qiimaha; dhaqdhaqaaqa ka hooseeya 30 waxaa loo arkaa digniin ah koror ku dhow. Falanqeeyayaasha qaar waxay ku talinayaan in la aqbalo heerarka 30 iyo 70 sida xuduudaha kaliya ee leh isbeddellada dhinaca, iyo 20 iyo 80 oo leh si cad oo muuqata oo xamaasad leh.
Dabcan, heerar ka sareeya 30 iyo 70 micnaheedu maahan inaad ubaahantahay inaad isla markiiba bilawdo sameynta heshiisyo. Si kastaba ha noqotee, suuqa ayaa laga yaabaa inuu ku jiro xaalad xad dhaaf ah oo xad dhaaf ah muddo dheer, iyo oscillator-ka, oo ka digaya isbeddelka isbeddelka hore, ma sharaxayo goorta sida dhabta ah ay taasi u dhici karto.
Sidee loo doortaa xilliga ugu habboon? Xaqiiqdu waxay tahay in waqtiyada kaladuwan ee isku lammaanaha lacagta ah, way ka duwanaan doonaan, sidaa darteed suurtagal ma noqon doonto in la isticmaalo hal xilli oo tilmaame si guul leh loo xushay dhammaan miisaanka waqtiga labada lamaane ee aad u baahan tahay. Sida caadiga ah, waqtiga yar oo ka yar, muddada ayaa sii dheeraaneysa iyo tan ka soo horjeedaba. Ma aha wax adag in la helo muddada ugu habboon ee tilmaame RSI - waxaad u baahan tahay inaad si isdaba-joog ah u eegto xilliyada oo aad u eegto aagagga xad-dhaafka ah iyo kuwa la iibsaday. Sida ugu dhakhsaha badan ee muhiimka ah (dib u noqoshada, furaha) sare iyo hoos udhaca shaxda qiimaha ayaa bilaabaya inay ka muuqato tilmaameha aagagga xad dhaafka ah iyo kuwa la iibsaday, inta hartayna waxay noqon doonaan (ugu yaraan badankood) meelaha ka baxsan aagaggan, tixgeli taas muddada ugu habboon ayaa la helaa.
Ganacsato badan ma jecla tilmaamayaasha caadiga ah iyo xitaa tilmaamayaasha mabda 'ahaan. Waxaan aaminsanahay inaysan si fudud u aqoonin sida loo karsado.